Ha Kafaanin Noqoshada Police. Qore: Idries Hajji Ali. | Hangool News
Ha Kafaanin Noqoshada Police. Qore: Idries Hajji Ali.
Waxaan sheclahay inaan inalawadaago maqaalka aan uguwanqalay “ha kafaanin noqoshada police”,waxaan ka afeefanayaa waxkasta oo khalad qoraal,hawraar,sharci,fikir oo kujira qormadaydan.
Dhalinyaradeena iyo gabi ahaan Dadkeenu waxa ay jecelyihiin inay kunoolaadaan barwaqo iyo bashbash taasina waa sababta ay wax ubartaan, ushaqaystaan, nolol uraadiyaan had iyo gooraale, waxayse jeclyihiin inay taas ku gaaran iyagoon hawshoon. Barigii hore soomalidu waxay unoolaayeen hab iskutashi shaqsi iyo mid bulsho ah. Tusaale ninkasta oo qaangaar ah hawlihiisa sida dhaqashada xoolaha, masruufka reerka, sahanka , raridda , furista, I.w.m isagaa maaraynjiray, danta guudna wuxuu ulasinaa dadka ay iskuhaybta ama deegaanka yihiin.
Markii magaaloyinka (Urbanization) soomalidu ay usoo hayaameen
waxaa korortay xadaarada , ganacsiga, hormarka , ilbaxnimada iyo tacliinta. Waxaa dhanka kale kordhay waxaa looyaqaan iskutirsananta tooska ah taasi oo ah in qofkasta waxkasugo qofkale oo ay ehel ama xigto ah, sababtoo ah waxaa meesha kabaxay dhaqankii soojireenka ahaa ee “xoolaynta qofka”. Ninku markuu guursado waa loxoolayn jiray wuxuuna noqonjiray qoys madaxbanaan oo kusoobiray beeshooda deedna wuu dhaqanjiray reerka iyo xoolaha waxana loo aqoonsanjiray nin waxgal ah.
Haddaba dhaqankaas iyo milgahaas suubani meesha ay kabaxeen oo lanoqday reer magaal waxay carqaladaysay nolosha ubadka iyo dhalinyarada, isagoo tacliin leh ninka dhalinyarada ayuusan haddana waxba ku qabanayn isagoo kudoodaya in qabyaaladjirto, shaqo la,aani jirto, sidoo kalena uusan kuqanacsanayn shaqooyinka hoose taasina ay uguwacantahay bulshada uu kudhexnoolyahay iyo habfikirkooda.
Gabi ahaanba kuma xisaabtaman shaqoyin ganacsiga gaarka looleyahay oo lamaba soo dhajiyo waxshaqoyin ah waayahan danbana waxay noqotay “nin iyo adeerkii”. Shaqooyinka muruqmaalka ee aan lakalaxigina way kasootaganyihiin. Waxa taas kasii daran sida dhalinyaradu ay u faquuqeen shaqoyinka hoose ee muruqmaalka ayay u faquuqeen shaqooyinka dawladda oo ah kuwao iyaga iyo bulshadooduba ay kubaahi bixi lahayeen sida walaha hayadda fulinta, police , CID , traffic iwm.
Sidaa awadeed dhalinyarada mutacalimiinta intooda badan waxay kuqanacsanyihiin kamidnoqoshada hayyadaha sharcidajinta (xildhibaan) iyo xukuumadda taasina waa sababta meelkasta ugu aragno ogaysiis xildhibaanimo inan dhalinyar oo mutacalima lagana yaabo inuusan helin kursiga dabadeedna niyadjabo, ama mid doonaya wasirnimo oo malin iyo layl odayaal shirinaya waxayse ka indho la’yihiin waaxda Fulinta(police) dawladda oo ah halka qofkasta mutacalim ah siwanagsan ugashaqaynkaro dadkana kukasbankaro isagoon bixin wax kharash iyo laalush ah.
Qormadaan oo aan uladanleeyahay dhalinyarada iyo cidkasta oo doonaysa inay mansab iyo miisan kudhexyeeshaan dalkooda, talada dalka kaqaybqaatan si dhibyar, baan uguwanqalay (“ha kafanin noqoshada police”!).
Maxaan u aragnaa had iyo jiir dhalinyaro iskusharaxday “xildhibaanimo ama doonaysa wasiirnimo” lakiin maxaa loowayay dhalinyaro aqoonyahan ah oo doonaysa noqoshada “police” ?
Dawladksta waxay leedahay haayad sharcidajin, garsoor iyo fulinta (police). Hayada police ku waa halka shaqada uguwanagsan lagaqabankaro hadii loohelo dhalinyaro mutacalimiin ah. Waahayadda kudhexjirta bulshadeeda markasta maalinkastana si joogta ah loogu baahanyahay shaqadeeda, waa waaxda aysan marnaba kamarmikarin hayadaha kale ee dawladuhu. Waa meesha ay ku urursantahay xogta dalwalba si sir ah, waana marinka ay usoomaran hayadaha kale dawladdu waxkabadalka dalka. Waa qayb samayn xoogan kuyeelankarta waxkabadalka meelo kaladuwan.
waana hayyada kaliya oo qofka danaynayaa inuu kubiiro aan laguxirin dhaqaale iyo sharuud adag.
Waddankasta waxaa uu leeyahay dhibaatooyin daashaday lakiin waxaa xaliya dadkiisa waxgalka iyo waxgaradka ah. Dhalinyaraddu waxay kudoodaan inay dalku kajiraan dhibatooyin dhaqaale, musuqmaasuq qurbajoog , shaqo la,aan , sixirbarar , boob , lakiin ay waxkaqabandoonan marka xil lagu aamino. Soomalidu waxay ku maahmaahdaa “xaglo laaban xoolo kumayimaadan”. Hadii aad kariwayday noqoshada xildhibaan muwaadina oo kafakara dadkiisa iyo dalkiisa sababo dhaqaale iyo qabiil awgood, hadaad wayday wasiirnimo sababo jira adigoo kuhaboon , noqo police waxad heli doontaa waayo aragnimo baaxad wayn, kasbo dadkaaga, ugu shaqee siwanagsan dabadeedna bulshadaada ayaa kugarandoonta xataa madaxwayne, waxay kugu ixtiraamayan codkooda musharaxkasta waad ka adgaandoontaa, waxad laxasabtamidoontaa kuwa boobaya dadka dalka adigana ciil iyo cadho kubaday kolhore.
Dad farabadan baa dalkooda waxbadan kabadalay iyagoo adeegsanaya awooda fulinta markii danbana ugasigudbay kursiga usareeya ee madaxwaynanimo halka innagu hayyada fulinta(police) aan quursano oo uu yaryahay/jirinba qofkuhanwayn oo jaamici ah.
Waxaan codsanayaa wixii toosin iyo tusaalayn ama waydiimo ah inaad igusohagajisan ciwanada xagga hoose kuxusan
Qore: Idries Hajji Ali.